Hetsika sendikaly : “Tsy natao hanonganam-panjakana” -
AccueilRaharaham-pirenenaHetsika sendikaly : “Tsy natao hanonganam-panjakana”
02/05/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Omaly vao maraina dia nanao diabe niainga avy eny Mahamasina nankeny Antsahamanitra ireo fikambanana sendilaky miaro ny zon’ny mpiasa. Niisa 38 ireo fikambanana sendikaly ireo ka ny “Sendikà matanjaka, antoky ny fandrosoana lovainjafy”, no lohahevitra nobanjinina tamin’ity taona ity. Nandritra ity fotoana ity no nentin’ireo mpiasa nanamafisana fa havaozina ny tolona sendikaly manombok’izao. Marihina fa ampy tsara ny lalàna mifehy ny zon’ny mpiasa eto Madagasikara, raha araka ny fanambaran’ny mpitarika hetsika sendikaly fa ny fomba fampiharana azy no mbola olana.
Araka ny voalazan’ny andininy faha-81 amin’ny fehezan-dalàna momba ny asa dia “andro tsy iasana nefa andraisana karama ny 1 mey” betsaka anefa ireo orinasa sy mpampiasa tsy manaja izany. Ohatra amin’izany ireo orinasa afakaba. Misy ihany koa ohatra rehefa misy raharaha mahakasika ny mpampiasa eny amin’ny Fitsarana dia tsy tonga manatrika izany mihitsy ilay voakasika. Fa ankoatra izay, mbola betsaka ihany koa ireo vehivavy misedra olana eny anivon’ny toeram-piasana. Ary nanitrikitrika izany mafy ny filohan’ny Fisamare, Rasomananoro Lalao, omaly, nandritra ity fankalazana ny fetin’ny mpiasa ity. Ao anatin’izany ny hoe rehefa bevohoka dia voaroaka. Tsy mitovy amin’ny an’ny lehilahy ny karamany fa mihena, tsy omena vola rehefa mandeha misotro ronono.
Noho izany,ampirisihina ny mpiasa mba hiditra amin’ny sendikà satria io ihany no afaka miaro azy ireo amin’ny fiarovana ny zony. Ankilan’izay dia manamafy ny ady amin’ny kolikoly ihany koa ny mpiasa satria ireny zavatra ireny dia miantraika mivantana amin’izy ireo.
Fa amin’ny toe-javatra ohatra izao moa dia tsy ialan’ny mpanararaotra foana. Nandritra ny fankalazana am-pilaminana nataon’ireo sendikaly omaly izay hatrany, nisy ireo nizara trakta nitaritana ny sain’ireo mpiasa hanao fanonganam-panjakana. Nazava tsara hafatra ny tao anatin’ilay taratasy nozaraina fa ny hanala ny fitondrana ankehitriny amin’ny toerana no tanjona. Nefa tsy adala ny olona ka ho voarebireby amin’izany fidinana an-dalambe izay tsy mitondra vokatra afa-tsy ny fahantrana lalina eto amin’ny firenena izany intsony. Nanamafy izany ny fanambaran’ny mpitarika ny hetsika manao hoe “Tsy avy aminay ity trakta ity ary ny sendika dia tsy manao pôlitika ary tsy manongam-panjakana. Ny sendika dia manaja ny zon’ny mpiasa, ny ady amin’ny fahamarinan-toeran’ny seha-piharian’ny mpiasa sy ny karamany.” Fantatra fa ry zareo avy ao amin’ny Fiombonan’ny fokonolona mandray andraikitra na ny Ffma no nanaparitaka ity trakta ity. Ny mpizara moa saika novonoin’ireo mpiasa satria nanimba ny fetin’izy ireo.